बीजेपीको जीतका कारण के हुन्? - वीर गोरखा
Home / Election / Nepali News / slider / नेपाली भाषा / बीजेपीको जीतका कारण के हुन्?
बीजेपीको जीतका कारण के हुन्?
दीपक राई Friday, May 16, 2014 Election, Nepali News, slider, नेपाली भाषा
भारतमा एउटै दलले बहुमत प्राप्त नगरेको तीस वर्ष भइसकेको छ। तर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अहिले त्यसतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। बीबीसी हिन्दीको वेबसाइटमा त्यसको कारण खोतलेकी छिन्, भारतीय वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्तीले। मोदीको चुनावी प्रचार अभियानलाई हेर्ने हो भने एउटै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागि उनी लडिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। मोदीको व्यवस्थापन, उत्साह, रणनीति यसमै केन्द्रित थियो। पछिल्लो तीन चार वर्षमा मौजुदा सरकारप्रति जनताको तीव्र निराशा थियो। यो निराशा अनि बढ्दो महंगीले पनि मोदीलाई सफलता दिलाउन मद्दत गर्यो।
पछिल्लो १५ वर्ष सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक जालमा फस्ने गरेको भन्दै उक्त राज्यको आलोचना हुंदै आएको छ। तर उत्तर प्रदेशले लगातार सरकार बदल्ने जनादेश दिदैं आएको पनि छ। विधानसभा चुनावहरुमा उत्तर प्रदेशका जनताले मायावतीको दल बहुजन समाज पार्टीलाई २०० भन्दा ज्याद सिट र मुलायम सिंह यादवको दल समाजवादी पार्टीलाई त्यो भन्दा धेरै सिटमा विजयी गराएका दृष्टान्त पनि छन्। उत्तर प्रदेशले केही खोजिरहेको जस्तो लाग्छ। त्यहां जनसंख्या ठूलो छ। कतिपय सामाजिक समस्या आए, परिवर्तन भए तर त्यसका बाबजुद पनि मोदीले सडक बिजुली र पानीको रणनीतिलाई सफलतापूर्वक जनतासमक्ष राख्न सके। साथै उनले हिंदुत्वको पनि प्रयोग गरे।
मोदीलाई चियावाला भनेर कंग्रेस पार्टीका एक नेताले भनेपछि त्यसले मोदीलाई झन् फाइदा पुर्यायो। बीजेपीले यसलाई पनि एउटा चुनावी रणनीति बनायो। चियावाला (मोदी) र ‘शाहज्यादा’ (राहुल गान्धी) बीचको प्रतिस्पर्धाका रुपमा बीजेपीले यो चुनावलाई देखाउन खोज्यो । यो नाराले केही फाइदा पुर्याए पनि बीजेपीलाई धैरै फाइदा गरेको जस्तो भने देखिदैन।
अधिकांश सञ्चारमाध्यम आफै चुनाव लडिरहेको जस्तो लाग्थ्यो। सञ्चारमाध्यम एउटा लहरबाट चलेको जस्तो देखिन्थ्यो, त्यो राहुल गान्धीको होस वा नरेन्द्र मोदीको। तटस्थता आवश्यक थियो तर त्यो हुन सकेन। चौबीसै घण्टा समाचार सम्प्रेषण गर्ने टिभीहरु हेर्दा कहिलेकांही त्यो स्वतन्त्र टिभी हो वा बीजेपीको मुख टिभी त्यो छुट्याउन मुश्किल पर्थौ। विश्लेषण के हो, खबर के हो गलत सूचना के हो अनि प्रचार के हो, अन्तर केही थिएन। यो चिन्ताको विषय हो। जे होस यो खुशीको दिन हो बीजेपीका लागि जसका लागि उसलाई बधाइ दिनै पर्छ।
खास भन्ने हो भने मोदीको छवि ब्राण्ड मोदी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगबाट बनाइएको चीज हो। यसमा विदेशमा बस्ने भारतीयहरु पनि सामेल थिए। यसमा ठूलो पैसा थियो। इन्टरनेटका लागि थुप्रै संस्थाहरु जस्तै सीएजी, इण्डिया २७२ जस्ता सामेल थिए। यो खर्च कसले व्योहर्यो, यी को मानिस थिए, उनीहरु कहांबाट आएका थिए, प्रष्ट छैन। गुजरात मोडेल, सडक-बिजुली-पानीको रणनीति जस्ता विषयलाई निकै उचालियो। यो वास्तवमा अत्यन्तै व्यवस्थित अभियान थियो। यसपछि नरेन्द्र मोदी एक जना चर्चित व्यक्ति स्टारका रुपमा देखा परे।
पछिल्लोपटक सन् १९८४ मा मात्रै कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त भएको थियो। त्यति बेला राजीव गान्धीको नेतृत्वमा कंग्रेसले ४१५ सिट ल्याएको थियो। त्यसको तीस वर्षपछि ठीक उल्टो विपक्षी भारतीय जनता पार्टीले बहुमत ल्याइरहेको छ। यो एक हिसाबले ठीकै होला तर हाम्रो जस्तो गठवन्धन समाजमा गठवन्धन सरकार जरुरी छ। चुनौती मोदीको अलग खालको छवि छ। उनी एकदमै विभाजित तथा विवादित छवि भएका व्यक्ति हुन् भन्ने बुझाइ धेरैमा छ। २००२ मा गुजरातमा भएको दंगालाई लिएर उनलाई मुसलमान विरोधी र हिन्दुत्वको प्रतिनिधिका रुपमा चित्रण पनि गरिन्छ। उनको उदयसंगै जुन किसिमको भय छ त्यसलाई उनले कसरी हेरेका छन् त्यो महत्वपूर्ण हुन आउंछ। अल्पसंख्यक र दलितको मनमा जुन डर छ त्यसको सामना उनले कसरी गर्छन् त्यसैले उनको शासन र नेतृत्वको भविष्य तय हुनेछ।